မြစ်ရေစည်းချက် ဧရာဝတီ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
“ . .ဧရာဝတီရေ စီးမြဲစီးစေ . .ဧရာဝတီရယ် ရိုးမကြားမှာ..ဧရာဝတီရေ မရပ်တန့်သရွေ့လေ . . ဧရာဝတီရေ စီးမြဲ စီးလို့ တို့ အသက်ရှင်မယ်လေ.. .”
သရက်ထောင်ထဲမှာ ကိုခွန်ဆိုင်း စပ်ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းပါ။ ဒီသီချင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံက ၁၉၉၀ စက်တင်ဘာ ၂၅ အင်းစိန်ထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အစာငတ်ခံသပိတ်တိုက်ပွဲကို အာဏာပိုင်တွေက ရိုက်နှက်ချေမှုန်းအပြီး သွေးသံရဲရဲ အဲဒီသပိတ်တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို သရက်ထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ရာကနေ အောင်လံမှ သရက်မြို့ဖက်အခြမ်းကို မော်တော်နဲ့ ကူးစဉ် ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပါတဲ့ ကိုခွန်ဆိုင်းက ဧရာဝတီမြစ် ဖြတ်ကူးစဉ် သူ့အတွေးထဲဝင်လာတဲ့ အနုပညာ သီချင်း တစ်ခုပါ။ ဧရာဝတီ ရေစီးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းလို့ ဆိုချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ငါတို့တွေ မသေဘူးပေါ့။
ဧရာဝတီမြစ်ရေစီးဟာ တကယ်တန်းပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်လို့ တင်စားရင်ရပါတယ်၊ ဧရာဝတီကို သက်သောင့်သက်သာ စီးစေချင်ပါတယ်၊ ဧရာဝတီကို မပျက်စီးချင်ပါဘူး၊ သာယာငြိမ့်ညောင်းစွာ စီးဆင်း စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧရာဝတီဟာ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကလို မဟုတ်တော့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော်ကလို မဟုတ်တော့တာ ကတော့ သေချာနေပါပြီ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ အမှိုက်တွေ စွန့်ပစ်ဓာတု ပစ္စည်းတွေနဲ့ မြစ်နဲ့ မြစ်ပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ်တွေဟာ သာယာမှုမရှိ ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မြစ်တစ်လျှောက်လုံးကိုလည်း ကြည့်လိုက်ရင်နေရာအတော်များများမှာ မြစ်ပြင်က ပြန့်ကားနေပြီး သောင်တွေထွန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ နွေဖက်ဆိုရင်တော့ ရေကွက်ကွက်ကလေးတွေသာရှိပြီး ရေစီးဟာ ပျင်းရီငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဧရာဝတီကို မြင်မိတိုင်း ဧရာဝတီကို ဒီအတိုင်းထားလို့ မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်အပါအဝင် တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း ဧရာဝတီကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းက သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ဧရာဝတီကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရပါတော့မယ်၊ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ရပါတော့မယ်။ အကယ်၍များ ကျွန်တော်တို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေက အပြစ်တင်ယုံတင်မကဘဲ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရ မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီကို သီကုံးဖွဲ့ဆိုကြတဲ့ သီချင်းတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာတော်တော်များပါတယ်၊ ဒါတင်မက ဧရာဝတီဟာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီဖက်ခေတ်ထိ အဖက်ဖက်က သမိုင်း အစဉ်အဆက် ကြီးမားခဲ့တာကိုလည်း ငြင်းလို့မရနိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းထဲကလို ဧရာဝတီရေ စီးမြဲ စီးလို့ တို့ အသက်ရှင်မယ်လေ.. ဆိုတာ ဧရာဝတီမြစ်ရေကို နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ တင်စားထားတာ ခုတော့ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေဟာ ခုလက်ရှိ ဧရာဝတီအတိုင်း အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ ‌ရေလယ်မှာ သောင်ထွန်းပြီး ရေစီးကလည်း စည်းချက်မမှန် ဟန်ချက်မညီ လာမယ့်အနာဂတ်မှာ ပျက်သုဉ်းတော့မယ့် သဘောဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ ရပ်တန့်သွားတော့မှာလား။
ကျွန်တော်တို့ဟာ သိပြီ သိနေပြီဆိုတော့ လူသားတွေပီပီ တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ မဟာလူသားတွေပီပီ ပြုပြင်ရပါတော့မယ်။ တစ်ခုခု လုပ်ကြရပါတော့မယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ . . . . . . .?
ချင်းအမျိုးသားများ၏သစ္စာရှိမှုက ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးမှာ အားဖြစ်စေသည်ဟု...